Yaa Dilay Sarkaalka u dhashay dalka Ugandha ee Meydkiisa laga helay xerada Xalane ee Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Yaa Dilay Sarkaalka u dhashay dalka Ugandha ee Meydkiisa laga helay xerada...
Yaa Dilay Sarkaalka u dhashay dalka Ugandha ee Meydkiisa laga helay xerada Xalane ee Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Sarkaal u dhashay dalka Ugandha ayaa laga helay Meydkiisa gudaha Xerada Xalane ee Magaaladda Muqdisho.
Sarkaalka wali aan la aqoonsan cida dishay ayaa ahaa kaaliyayaasha Taliyaha Booliska AMISOM ee Soomaaliya, waxaana meydkiisa laga helay hoygii uu ka degganaa Xeradda.
Mid ka mid ah Saraakiisha Booliska AMISOM ee Soomaaliya ayaa Sheegay inuu Socdo baaritaano la xiriira cida ka dambeysay dilkiisa, maadaama marar badan Xeradaasi ay ka dhaceen Toogashooyin ay isku geysteen Saraakiil iyo Ciidamo Ajaanib ahaa.
Illaa hadda ma jirto cid Xaqiijisay Sababta ka dambeysay Geerida Sarkaalkaasi oo ka tirsanaa Ciidamada Booliska Amisom qeybta ka howlgasha Magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
lagu dilay xerada Xalane
meydkiisa la helay